न्युजिल्यान्डमा गाईवस्तुको डकारमा कर लगाउने निर्णय, बन्यो यस्तो योजना ल्याउने पहिलो देश
काठमाण्डौ । न्युजिल्यान्डले गाईवस्तुको डकारमा कर लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। ग्लोबल वार्मिङका लागि जिम्मेवार हरितग्यास गृहको समस्यासँग जुध्नका लागि न्युजिल्यान्ड सरकारले यस्तो कदम उठाउन लागेको हो। यससँगै गाईवस्तुले उत्सर्जन गर्ने मिथेन ग्यासमा कर लगाउने न्युजिल्यान्ड विश्वकै पहिलो देश बन्नेछ। न्युजिल्यान्डमा...
मन्दीबारे एलन मस्कको भविष्यवाणी सत्य हुन लागेकै हो ? विश्वभर नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने घोषणा
काठमाण्डौ। विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाका संस्थापक एलन मस्कले बारम्बार अर्थतन्त्र राम्रो नहुने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। केही दिनअघि उनले मन्दीको सम्भावना पनि व्यक्त गरेका थिए। अब अवस्था यस्तै रह्यो भने टेस्लामा ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती हुन सक्ने उनको भनाइ थियो। टेस्ला इंकका सीईओ एलन मस्कले...
बुलेट बाइक निर्माता कम्पनीको सेयरमा हाईस्पिड रिटर्न, रु. १ लाखको लगानी बन्यो रु. २७ करोड
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा लगानी गर्नेलाई जानकारहरुले दुईवटा महत्वपूर्ण सल्लाह दिन्छन्। पहिलो सल्लाह भनेको छोटो अवधिमा ठूलो नाफा कमाउने प्रलोभनमा पर्नुको सट्टा दीर्घकालीन लगानी गर्नु हो। दोस्रो सल्लाह भनेको प्रचार गर्नुको सट्टा आफैँ कम्पनीको आधारभूत कुराहरु जाँच्नु र राम्रो लागेमात्र लगानी गर्नु। त्यस्ता धेरै स्टकहरु हुन्छन्।...
रुसद्वारा भारतलाई सस्तोमा तेल बेच्न अस्वीकार, मूल्य अझै बढ्न सक्ने
काठमाण्डौ । रुसले भारतलाई सस्तोमा कच्चा तेल बिक्री गर्न अस्वीकार गरेको छ। रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता सस्तोमा कच्चा तेल खरिद गरिरहेको भारतलाई अब रुसले सस्तोमा तेल बिक्री नगर्ने जनाएको हो। भारतका दुईवटा सरकारी तेल कम्पनीहरु भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन र हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले केही समयदेखि रुसी कम्पनी रोसनेफ्टसँग तेल खरिदका...
मस्क–बेजोस बन्ने बाटोमा यी युवा, २५ वर्षमै बने अर्बौंको मालिक
काठमाण्डौ । फोर्ब्स म्यागेजिनले हालै अमेरिकाका अलेक्जेन्डर वाङलाई विश्वको सबैभन्दा युवा सेल्फ–मेड अर्बपति घोषणा गरेको छ। एसियाली मूलका २५ वर्षे अलेक्जेन्डरको अर्बपति बन्ने कहानी उनको उमेर जति नै छोटो छ। गणितमा रुचि भएका कारण अलेक्जेन्डर कक्षा ६ देखि नेसनल म्याथस् एन्ड कोडिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन सुरु गरे ता कि डिज्नी वर्ल्डको...
ब्रोकरमाथि कडाइ गर्दै सेबी, लगानीकर्ताको पैसा सुरक्षित गर्न ल्याउँदैछ यस्तो योजना
काठमाण्डौ । कार्बी स्टक ब्रोकिङको डिफल्टपछि भारतीय सेयर बजार नियामक सेबी लगानीकर्ताको पैसा र सेयर सुरक्षित बनाउने योजनामा काम गरिरहेको छ। यसअघि यी विषयमा सेबीले धेरै कदम चालेको थियो। अहिले फेरि सेबी केही नयाँ विकल्पहरुमा पनि विचार गर्दैछ। सेबीले सेयरजस्तै फन्ड लगानीकर्ताको खातामै रहनुपर्ने र ब्रोकरको खातामा ट्रान्सफर गर्न...
गहुँ निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाए भारतलाई हुनसक्छ ठूलो नोक्सानी, के सोच्दैछ सरकार ?
काठमाण्डौ । भारत सरकारले छिट्टै करिब १२ लाख टन गहुँ निर्यात गर्न स्वीकृति दिन सक्ने बताइएको छ। भारत सरकारले गत महिना गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठूलो परिमाणमा गहुँ बन्दरगाहमा अड्किएको थियो। भारत सरकारले बन्दरगाहमा जम्मा भएको गहुँ खाली गर्न चाहन्छ। जसका लागि १२ लाख टन गहुँ बाहिर पठाउन सक्नेछ। भारतले गत मे १४ देखि गहुँको...
श्रीलंका संकट: अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्ति गर्न ५ बिलियन डलर आवश्यक
काठमाण्डौ । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले आगामी ६ महिनाका लागि अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्ति गर्न श्रीलंकालाई ५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने बताएका छन्। श्रीलंकाको संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री विक्रमासिंघेले खाद्यान्न, इन्धन र रासायनिक मलका लागि ५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने बताएका हुन्। विक्रमासिंघेले इन्धन आयातका...
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले बढायो ब्याजदर
काठमाण्डौ । अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंक द रिजर्भ बैंक (आरबीए)ले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धि गरेको छ। आरबीएले ५० बेसिक प्वइन्टले अर्थात ०.८५ प्रतिशतले ब्याजदर वृद्धि गरेको हो। यो वृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो। आरबीएले २५ देखि ४० बेसिक प्वइन्टसम्म वृद्धि गर्ने अनुमान गरेका अर्थशास्त्रीहरु बैंकको निर्णयबाट...
ट्विटर किन्ने सम्झौता रद्द गर्ने एलन मस्कको धम्की
काठमाण्डौ। टेस्ला कम्पनीका सीईओ एलन मस्कले ट्विटर किन्ने सम्झौता रद्द गर्ने धम्की दिएका छन्। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार ट्विटरले स्प्याम र नक्कली अकाउन्टका बारेमा सटिक जानकारी नदिएकोले मस्कले ट्विटर किन्ने सम्झौता रद्द गर्ने धम्की दिएका हुन्। यसअघि मस्कले ट्विटरसँगको सम्झौता अस्थायी रुपमा रोक्ने घोषणा गरेका थिए। एलन...
स्टक स्प्लिटः १ कित्ता सेयरलाई २० कित्तामा टुक्राउँदै अमेजन, यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ। अमेजनले औसत लगानीकर्ताले खरिद गर्न सक्नेगरी सेयरको मूल्य घटाउने भएको छ। कम्पनीले स्टक स्प्लिट गरी प्रतिकित्ता २ हजार ५०० डलर रहेको कम्पनीको सेयरमूल्य घटाउन लागेको हो। कम्पनीको सेयरमूल्य धेरै भएकाले औसत लगानीकर्ताको पनि पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले स्टक स्प्लिट गर्न लागेको हो। यसबाट कम्पनीको आ�...
तेलमा परनिर्भरता घटाउँदै भारत, पेट्रोलमा इथानोलको मिश्रण बढाउँदै
काठमाण्डौ। भारतले पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्ने लक्ष्य पाँच महिनामा अघि नै पूरा गरेको छ। भारत सरकारले कच्चा तेलको आयातमाथिको परनिर्भरता कम गर्नका लागि सन् २०२५–२६ सम्म यो आँकडा दुईगुणा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। भारत सरकारले सन् २०२२ भित्र उखु र अन्य कृषिजन्य वस्तुबाट निकालिएको इथानोललाई पेट्रोलमा १० प्रतिशत मिश्रण...
दोब्बर बढीले बढ्यो युक्रेनमा बैंक ब्याजदर, २५% पुग्यो
काठमाण्डौ । युक्रेनको केन्द्रीय बैंक ‘नेसनल बैंक अफ युक्रेन’ले ब्याजदर दोब्बरभन्दा बढीले बढाउँदै २५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यो ब्याजदर युरोपभरिमै उच्च हो। रुसको आक्रमणपश्चात निरन्तर वृद्धि भइरहेको मुद्रास्फीतिलाई रोक्न र मुद्राको मूल्यमा आइरहेको गिरावट थाम्न युक्रेनको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको हो। युक्रेनमा युद्ध सुरु...
आर्थिक मन्दीको सम्भावनाले एलन मस्क अत्तालिए, १०% कर्मचारी कटौती गर्ने
काठमाण्डौ । विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले कर्मचारीको संख्यामा १० प्रतिशत कटौती गर्ने भएका छन्। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबाट अत्तालिएका मस्कले टेस्ला कम्पनीमा कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले एउटा इन्टरनेट मेलका आधारमा यस विषयलाई लिएर रिपोर्ट सार्वजनिक...
रुस–युक्रेन युद्धः अब के हुन सक्छ ? यस्ता छन् ५ सम्भावना
काठमाण्डौ । युद्ध भएपछि कसैको हार र कसैको जित हुन्छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण पनि अपवाद होइन। रुसको युक्रेनतर्फ तीव्रगतिमा अगाडि बढिरहेको छ। मिसाइल र बमबारुदले सहरहरुको विनाश भइरहेको छ। युक्रेनी नागरिकहरु स्वःस्फुर्त रुपमा ‘सिपाही’ बनिरहेका छन्। युद्ध जारी छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणको १०० दिन पूरा हुन लागेको छ। अब यो युद्धमा के...